दोलखा उद्योग वाणिज्य संघमा सवैभन्दा बढी मत ल्याउने दिनेश बस्नेत को हुन् ? - Edolakha
दोलखा उद्योग वाणिज्य संघमा सवैभन्दा बढी मत ल्याउने दिनेश बस्नेत को हुन् ?
3 months ago/Monday, May 13th, 2019
दोलखा, ३० बैशाख ।
दोलखा उद्योग वाणिज्य संघको २२ औं अधिवेशनमा सवैभन्दा बढी मत ल्याएर बिजयी हुने दिनेश बस्नेतको यतिखेर चर्चा सुरु भएको छ ।
आफ्नो प्यानलका अध्यक्ष सुन्दर कार्की पराजित हुँदा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित इन्द्रवहादुर श्रेष्ठको भन्दा बढी मत ल्याउने बस्नेतको चर्चा सुरु भएको हो । हिजो सम्पन्न निर्वाचनमा बस्नेत ४ सय ७ मत ल्याएर सदस्य पदमा बिजयी भएका हुन् । बस्नेत अध्यक्षमा निर्वाचित इन्द्रवहादुर श्रेष्ठको भन्दा चार मत बढी ल्याएर बिजयी भएका थिए । अध्यक्ष पदका प्रत्यासी श्रेष्ठले ४ सय ३ मत र कार्कीले ३ सय ६७ मत ल्याएका थिए ।
किन बनेनन् ? बस्नेत अध्यक्षको उम्मेदवार
सदस्य पदमा निर्वाचित दिनेश बस्नेतले आफ्नो प्यानलका अध्यक्ष सुन्दर कार्की भन्दा ४० मत बढी ल्याएका छन् । जवकी कार्की अध्यक्ष पदका प्रत्यासी श्रेष्ठसँग ३६ मतले पराजित भएका थिए । अध्यक्ष पदको मतान्तर र सदस्य पदमा बस्नेतले सवैभन्दा बढी मत ल्याएसँगै बस्नेतलाई अध्यक्ष पदको उम्मेदवार नबनाएर गल्ति गरिएको बिश्लेषण सुरु भएको छ । उम्मेदवार तय गर्ने क्रममा दिनेश बस्नेतलाई अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाउने चर्चा भएपनि अन्तत सुन्दर कार्की अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनेका थिए । बस्नेत आफै उम्मेदवार बन्न चाहेनन् वा बनाईएन ? भन्ने बिषय खुलेको छैन ।
कार्की प्यानलवाट सदस्य पदमा बिजयी भएका ६ जना उम्मेदवार मध्ये दिनेश बस्नेत, बलराम थापा र श्यामकृष्ण कायस्थले अध्यक्ष पदका प्रत्यासी कार्की भन्दा बढी मत ल्याएर बिजयी भएका छन् । थापाले ३ सय ८० र कायस्थले ३ सय ७४ मत पाएका थिए । उद्योग वाणिज्य सँघको निर्वाचनमा सवैभन्दा बढी मत ल्याउने दिनेश बस्नेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट दोलखाका सफल व्यवसायी हुन् । बस्नेतको सदरमुकाम चरिकोटमा सवैभन्दा ठूलो खाद्यान्न तथा किराना होलसेल पसल र बिभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरुको मुख्य डिलरहरु रहेका छन् । सफल युवा व्यवसायी बस्नेतले सातदोवाटो चोकमा भव्य व्यवसायीक महल निर्माण गरिरहेका छन् । बस्नेत अघिल्लो कार्यकालमा पनि दोलखा उद्योग वाणिज्य संघको द्धितिय उपाध्यक्ष थिए ।
तिन वटै शाखाका उम्मेदवार पराजित
दोलखा उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा सिंगटी, मागादेउराली र मैनापोखरी शाखाका सवै उम्मेदवार पराजित भएपछि ति शाखा मातहतका सदस्यहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आक्रोश पोख्न थालेका छन् । चरिकोटका व्यवसायीले अन्य शाखाका उम्मेदवारहरुलाई मतदान नगरी घात गरेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा गम्भिर ढँगले सोच्नु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । संघमा अध्यक्ष र १५ जना सदस्य सहित १६ जना निर्वाचित हुँदा सिंगटी, मागादेउराली र मैनापोखरी शाखाका सवै उम्मेदवार पराजित भएका हुन् । तिन वटा शाखावाट प्रतिनिधित्व गर्ने सवै उम्मेदवार पराजित भएपछि दोलखा उद्योग वाणिज्य संघमा चरिकोटवाट मात्रै प्रतिनिधित्व भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघको चुनावी नतिजा हेर्दा सवैभन्दा बढी मत भएको चरिकोटका उद्योगी व्यवसायीले चरिकोटका उम्मेदवारलाई मात्रै छानिछानि मतदान गरेको देखिएको छ । प्यानलका उम्मेदवारहरुको मत समेत निकै क्रश भएको छ ।
श्रेष्ठ प्यानलवाट सदस्य पदका उम्मेदवार बनेका पूर्व कोषाध्यक्ष निलाकुमार श्रेष्ठ र कार्की प्यानलका उम्मेदवार विकास श्रेष्ठ दुवै पराजित भएका छन् । उनीहरु मागादेउराली शाखावाट प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवार बनेका थिए । यस्तै, कार्की प्यानलवाट उम्मेदवार बनेका सिंगटी शाखाका व्यवसायीहरु सुन्दर श्रेष्ठ र राकाजी खड्का तथा मैनापोखरी शाखाका गंगावहादुर बुढाथोकी (प्रदिप) तथा सोही शाखावाट श्रेष्ठ प्यानलवाट उम्मेदवार बनेका सुरेन्द्र उप्रेती पनि पराजित भएका छन् ।
३० बैशाख २०७६ । १ः१५ बजे प्रकाशित
VIEWS: 11105 पटक हेरीएको